Masaajidka ugu weyn Afrika oo ay ku tukan karaan 120 kun oo qof ayaa dhismahiisu ka dhamaaday dalka Aljeeriya | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Masaajidka ugu weyn Afrika oo ay ku tukan karaan 120 kun oo qof ayaa dhismahiisu ka dhamaaday dalka Aljeeriya
Published on April 29, 2019 by sdwo · No Comments
Masaajidkan oo laga hirgeliyey dalka Aljeeriya waxa dhistay shirkad Chines ah oo ku dhamaystirtay mudo 7 sano ah. Waxa ku baxay lacag dhan $1 billion oo doolar. Wuxuu noqday masaajidka 3aad ee aduunka ugu weyn isla markaasna masaajidka afirka ugu weyn isla markaasna minaarada afirka ugu dheer leh. Waxa qudha oo ka weyn labada masaajid ee Maka iyo Madina. Masaajidkan ayaa ku fadhiya dhul baaxadiisu dhantahay 400 oo kun oo meter iskuweer.
Masjidkan ayaa waxa ku tukan kara 120 kun oo qof. waxaanu masaajidkani leeyahay meel baabuurta la dhigto (underground parking) qaadaysa 7 kun oo gaadhi. Masaajidku wuxu leeyahay qaybo badan sida dugsi quraan, maktaba(library) Restaurant, qayb cilmi baadhiseed (Research Centre) oo taariikhda Aljeeriya laga helidoono.